Madaxweynaha Somaliland oo kulan xasaasi ah la yeeshay Safiirka Ingiriiska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Somaliland oo kulan xasaasi ah la yeeshay Safiirka Ingiriiska
Ardaan Yare 19 January 2021
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiska ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska, Amb. Ben Fender oo uu wehelinaayey Mr Stuart Brown oo ah madaxa xafiiska Ingiriiska ee Somaliland oo booqasho ku tegay Magaalada Hargeysa.
Kulankan oo daarnaa xog warran guud ayaa lagaga wada hadlay qodobbo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka Somaliland ee golaha wakiillada iyo deegaanka oo lagu wado inay dalka ka qabsoonto 31/05/2021. Ka dib markii ay cayimeen komishanka doorashooyinka, kuna raaceen saddexda xisbi loona gudbiyey golaha guurtida Somaliland oo go’aanka u danbeeya iska leh.
Waxa kale oo lagu lafo guray kulanka deeqaha dalka ingiriisku Somaliland ku taageero dhinaca mashaariicda horumarineed ee arrimaha bulshada, sidoo kale waxa laga wada hadlay xaaladda amni ee wakhtigan ay ku sugan tahay mandaqadda geeska Afrika.
Madaxwweynaha Somaliland, safiirka uga mahadnaqay muddadii ay soo wada shaqeeyeen, maaddaama oo lugtii ugu danbaysay shaqadiisu ay ahayd maanta oo madaxweynuhu ku qaabilay xafiiskiisa. Iyadoo madaxweynuhu uga mahadnaqay dawladda Ingiriiska inay is waafajisay tiirarka qorshaha horumarinta Somaliland iyo deeqaha Ingiriisku siiyo Somaliland.
DEG DEG:-Al-shabaab oo la wareegay degaan ay ka baxeen Ciidanka AMISOM
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Arrimo muhiim ah kala hadlay Swedan